Mirongatra ny lozam-pifamoivoizana: “Tompon’andraikitra voalohany ny mpamily”, hoy ny zandary | NewsMada
Mirongatra ny lozam-pifamoivoizana: “Tompon’andraikitra voalohany ny mpamily”, hoy ny zandary
Tao anatin’ny andro vitsivitsy izay, tsapa ho mirongatra dia mirongatra ny lozam-pifamoivoizana nandratrana, namoizana ain’olona… saiky manerana ny Nosy. Samy tompon’andraikitra avokoa ny rehetra, saingy ”tsy afa-miala ny mpamily fa tompon’andraikitra voalohany amin’izany”, hoy ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena.
« Tompon’andraikitra voalohany ny mpamily », hoy ny fanazavan’ny Zandarimariam-pirenena manoloana ny firongatry ny lozam-pifamoivoizana tato ho ato izay namoizana ain’olona sy nandratrana olona teny amin’ny lalam-pirenena. Nohamafisin’ny zandary hatrany fa samy tompon’andraikitra avokoa ny rehetra, saingy tsy afa-miala ny mpamily fa tompon’andraikitra voalohany amin’izany. « Ndao isika hifanome tanana hisorohana ny lozam-pifamoivoizana. Manerana ny Nosy, saika ahitana hatrany trangana lozam-pifamoivoizana isan’andro ary isan’izany ny eto Vakinankaratra », hoy ny zandary. Samy tompon’andraikitra avokoa ny rehetra manoloana izany loza mateti-pitranga izany.
Entanina hanao fitsirihana ara-teknika…
Nanentana ny tompon’ny fiara ny zandary amin’ny tokony hanaovana fitsirihana ara-teknika ny fiara ary aoka hisy fizahana sy fanamboarana ny fiara raha vao tonga sy mialoha ny hiaingana. Tompon’andraikitra voalohany amin’ny ain’ny mpandeha ianao ka raha mpamily tsy manana saina sy finiavana hitandrina sy hikolokolo ny fiara entina sy ny mpandeha ao aminy, tsara aminao ny miova asa hafa. Marihina fa raim-pianakaviana iray 50 taona no maty nofaohin’ny kamiaobe teny Fenoarivo, omaly. Nandeha mafy ilay kamiaobe ka nifaoka ilay niharam-boina, lasa nitsoaka kosa ilay mpamily. Toy izany koa teny Imerinafovoany, fiara iray no nitrongy tranon’olona iray. Naratra mafy ny olona tao anatin’ilay fiara.